Sacuuiga oo Ciidamo u diraya Suuriya – Radio Daljir
Abriil 18, 2018 6:06 b 0
Wasiirka arimaha dibadda ee Sacuudi Carabiya Cadal Al-Jubayr ayaa sheegay inay doonayaan ciidamo dalkiisa uu udiro dalka Suuriya, iyadoo madaxwaynaha Mareykanka la sheegayo inuu waddo qorshe ciidamadiisa uu uga la baxayo Suuriya.
Boqortooyada Sacuudiga ayaa wada hadalo kula jirta dowladda Mareykanka oo kusaabsan inay ciidamo ay u dirto dalka Suuriya, si’ ay u balaariyaan isbahaysiga Suuriya ka howlgalaya ee Mareykanka uu hogaamiyo.
Wasiirka arimaha dibadda ee Sacuudi Carabiya ayaa sheegay inay ahayn wax cusub go’aanka ciidamada ay ugu dirayaan Suuriya, ee xiligii uu ahaa madaxwaynaha Mareykanka Brack Obama inay fakerkaan ay qaateen.
“Waxaa wada hadalo inoo socdaa Mareykanka tan iyo markii Siiriya uu ka bilowday dhibaatooyin, inagoo ka wada hadlayna ciidamado aan u dirno Suuriya” ayuu wasiirka arimaha dibadda ee Sacuudiga Carabiya ka sheegay magaalada Riyadh ee dalka Sacuudiga isagoo uu dhinac taagnaa xoghayaha guud ee QM Antonio Gutress.
“Waxaa aynu samaynay qorshahan xiligii maamulka Obama, Sacuudiga waxaa uu tixgalinayaa inuu ku biiro dagaalka Suuriya” ayuu sidoo kalle yiri wasiirka arimaha dibadda ee Sacuudiga.
Ku dhawaaqista Boqortooyada Sacuuiga ayaa ahaa wax horay loo filayay, Sacuudiga ayaa hogaamiya dagaalka dalka Yemen ee dowladaha Khaliijka ay kula dagaalmayaan kooxda Xuutiyiinta, iyagoona garab siinaya xukuumadda Yemen.
Madaxwynayaasha Soomaaliya oo balan qaad ka helay Masar